Kylian Mbappé oo jawaab kulul ka bixiyay wararka la xiriirinayo kooxda Real Madrid – Gool FM
HORUDHAC: Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka Europa League ee ay Man United qaabilayso Kooxda Astana
Kylian Mbappé oo jawaab kulul ka bixiyay wararka la xiriirinayo kooxda Real Madrid
(Paris) 12 Juunyo 2019. Xiddiga kooxda Paris Saint-Germain iyo xulka qaranka Faransiiska ee Kylian Mbappé ayaa sheegay in xiligan aysan ku habooneen inuu ka hadlo wararka lala xiriirinayo inuu u dhaqaaqayo Real Madrid, islamarkaana shaki uu ku jiro mustaqbalkiisa.
Waxaa sii xoogeystay shakiga ku aadan mustaqbalka Kylian Mbappé, kaddib markii uu sheegay hadalo cajiib ah bishii lasoo dhaafay ee ku aadanaa in loo baahan yahay inuu qaado mas’uuliyada badan, haddii ay ahaan lahayd PSG ama koox kale.
Kylian Mbappé ayaa xalay dhaliyey goolkiisii 100-aad ee xirfaddiisa ciyaareed waxaana uu ka dhaliyey kulanka xulkiisa Faransiisku 4-0 uga adkaaday Andorra ee isreeb-reebka heerka guruubyada koobka qarammada Yurub.
Goolkii furitaanka ee uu xalay ka dhaliyey Kylian Mbappé xulka Andorra waxa uu ahaa goolkiisii 13-aad ee uu u dhaliyo xulkiisa France, sidoo kale waxa uu kooxdiisa PSG u dhaliyey 60 gool, halka kooxdiisii hore ee Monaco uu u saxiixay 27 gool, taasoo ka dhigan inuu wadar ahaan 100 gool dhaliyey xirfaddiisa ciyaareed.
Hadaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa soo xigtay su’aal la weydiiyay Kylian Mbappé ciyaarta kaddib iyo jawaabtii uu ka bixiyay, wuxuuna yiri:
“Ma ahan wakhtiga saxda ah ee aan ka hadli lahaa Real Madrid, mar walba waxaad i weydiisaa isla hadalkaas oo kale, laakiin kani ma ahan wakhtiga ku haboonaa ee saxda ah”.
Si kastaba ha ahaatee, Kylian Mbappé ayaa yimid Paris Saint-Germain xagaagii 2017 isagoo kaga soo dhaqaaqay kooxda Monaco heshiis qaali ah ee gaarsiisan 180 million euros.
SUUQA: Xiddig ay si weyn u dooneysay Man United oo kooxdiisa ku wargaliyay inuu ku riyoodo ka ciyaarista Old Trafford.
Halkey marayaan wadahadalada la sheegay iney u dhaxeeyaan Frank Lampard iyo maamulka Blues - miyuu kusoo laabanayaa Bridge?